छनौट गर्नु अघि मल सुकाउने मेसिन, तपाइँ तपाइँको सुख्खा आवश्यकता को एक प्रारम्भिक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ:
कणको लागि सामग्री: भौतिक गुणहरू के हुन्छ जब तिनीहरू गीला वा सुख्खा हुन्छन्? ग्र्यानुलरिटी वितरण के हो? विषाक्त, ज्वलनशील, संक्षारक वा घर्षण गर्ने?
प्रक्रिया आवश्यकताहरू: कणहरूको ओस सामग्री के हो? के ओस समान रूपमा कणहरु भित्र वितरित छ? कणहरूको लागि प्रारम्भिक र अन्तिम नमी सामग्री आवश्यकताहरू के हुन्? कणहरूको लागि अधिकतम सुकाउने सुकाउने तापमान र सुकाउने समय के हो? के सुख्खा तापमान सुकाउने प्रक्रिया भर मा समायोजन गर्न आवश्यक छ?
क्षमता आवश्यकताहरू: के सामग्रीहरू ब्याचमा वा लगातार जारी राख्न सकिन्छ? कति सामग्री हुनु पर्छ मल सुकाउने मेसिन प्रति घण्टा ह्यान्डल? उच्च-गुणस्तरको अन्त उत्पादन प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ? सुक्खा पहिले र पछिको उत्पादन प्रक्रियाले कसरी छनौटमा प्रभाव पार्छमल ड्रायर?
तयार गरिएका उत्पादनहरूका लागि गुणस्तरको आवश्यकताहरू: के सामग्री सुक्ने, गिरावट हुने, ओभर-ड्राई, वा सुख्खा हुँदा दूषित हुनेछ? यसको अन्तिम ओसको मात्रा कती वर्दी हुनु पर्छ? अन्तिम उत्पादनको तापक्रम र भोल्यूम घनत्व के हुनुपर्दछ? के सुक्खा सामग्री धूलो उत्पादन वा माध्यमिक रिकभरी आवश्यक छ?
कारखानाको वास्तविक वातावरणीय अवस्था: कारखानामा सुकाउने प्रक्रियाका लागि कति उत्पादन स्थान उपलब्ध छ? तापक्रम, आर्द्रता र कारखानाको सफाई के हो? सही बिजुली संसाधनहरू, निकास ग्यास पोर्ट सहित संयंत्र के हो? स्थानीय वातावरणीय नियमहरुका अनुसार बोटमा आवाज, कम्पन, धुलो र तापीय ऊर्जा गुमाउने मात्रा के हो?
यी मुद्दाहरूलाई विचार गरेर, केही मल सुकाउने मेसिनहरू जुन तपाईंको वास्तविक उत्पादनको लागि उपयुक्त छैनन् त्यो नष्ट हुनेछ। उदाहरण को लागी, कच्चा माल को भौतिक वा प्रसंस्करण सुविधाहरु केहि ब्यक्ति गर्दछ मल सुकाउने मेसिनहरू, उच्च ओसिलो सामग्रीको लागि स्टीम-प्रकार रोटरी ड्रम मल सुकाउने मेशिन, मीका जस्ता चिपचिपा ठूला कच्चा मालहरू राम्रो विकल्प छैन। को रोटरी ड्रम मल सुकाउने मेशीन घुमाउँदा र रोलिंग गरेर यसलाई सुख्खाउँदा यस सामग्रीलाई ढुवानी गर्दछ, तर यो निष्क्रिय डिलिभरीले सजिलैसँग चिपचिपा पदार्थलाई आउटलेटमा ट्रान्सपोर्ट गर्दैन, किनकि चिपचिपा सामग्री ड्रम भित्ता र स्टीम पाइप, वा थप्पडहरूमा टाँसिन्छ। यस अवस्थामा, सर्पिल कन्वेयर वा अप्रत्यक्ष मल्टि डिस्क मल्टि dry सुक्खा मेशिनहरू उत्तम विकल्प हो, यो सक्रिय डेलिभरीले, द्रुत रूपमा फिड पोर्टबाट डिस्चार्ज पोर्टमा मीकालाई स्थानान्तरण गर्न सक्दछ।
अर्को विचार गर्नुहोस् मल सुकाउने मेसिन त्यो तपाईंको वास्तविक पदचिह्न र उत्पादन ठाउँ मिल्छ। कुनै पनि मल सुकाउने मेशिनहरू समावेश नगर्नुहोस् जुन अवस्थित उत्पादन सर्तहरूको लागि उपयुक्त छैन वा महँगो नवीकरण वा विस्तार लागत आवश्यक पर्दछ। पूंजी बजेट र अपरेटिंग लागत र अन्य कारकहरू पनि विचार गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ तपाइँको अवस्थित सुकाउने प्रक्रियालाई अनुकूलन गर्नको लागि एक उच्च प्रदर्शन मल सुकाउने मेसिन छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले अवस्थित अन्य उपकरणहरू कि भनेर विचार गर्नुपर्छ। कन्वेयरहरू, फिडरहरू, कोटिंग मेशिन, प्याकेजि machines मेशिनहरू, गोदामहरू, र अन्य उपकरणहरू, नयाँ मल सुकाउने मेसिनको बृद्धि भएको उत्पादनसँग मेल खान सक्छ।
मल सुकाउने मेसिन विकल्पहरूको दायरा संकुचित भएपछि, मल सुकाउने मेसिन वास्तवमै उपयुक्त छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि अवस्थित सामग्री र अवस्थित उत्पादन वातावरण प्रयोग गर्नुहोस्।
Existing अवस्थित सामग्रीका लागि उत्तम सुक्ने अवस्था।
Raw मल सुकाउने मेसिनको प्रभाव कच्चा मालको भौतिक गुणहरूमा।
● सुक्खा सामग्रीको गुणस्तर र सुविधाहरूले आवश्यकताहरू पूरा गर्छन् कि गर्दैनन्।
● मल सुखाउने मेसिन क्षमता उपयुक्त छ कि छैन।
यी परिक्षण परिणामहरूमा आधारित, को निर्माता मल सुकाउने मेसिन तपाइँको सुख्खा आवश्यकताहरू पूरा गर्न विस्तृत सिफारिसहरू प्रदान गर्न सक्छ। निस्सन्देह, मल सुकाउने मेसिनको स्थापना र संचालन लागतहरू र मल सुकाउने मेसिनको अनुरक्षण आवश्यकताहरूलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन।
माथिका सबै विवरणहरूलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईं वास्तवमै खरीद गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा उपयुक्त मल सुकाउने मेसिन.
पोष्ट समय: जुन -१-20-२०१२